SOOSAARAYAASHA HILIBKU WAXAY AHAYD INAY "NOOLAADAAN" SANNADKII HORE - UKRAINE
Sida laga soo xigtay khabiirka FAO, Andrei Pankratov, sannadkii la soo dhaafay, soo saarayaasha hilibka Ukraine ayaa la kulmay dhibaatooyin badan oo la xidhiidha kororka qiimaha badarka ee noocyada kala duwan ee hilibka sababtoo ah hryvnia raqiis ah, iyada oo qiimaha doolarka ee doollar muujin waayeen rajo cusub. Kharashka hilibka lo'da, marka la barbardhigo noocyada kale ee hilibka, ma aha wax soosaaraya soo saarayaasha. Hoosudhaca wax soo saarka iyo kororka dhoofinta ayaa keenay hoos u dhac ku yimid qiimaha hilibka lo'da ee gudaha suuqa, taas oo taageertay qiimaha. Adeegga Tirakoobka Gobolka ayaa keenay xogta tilmaamaysa in sicirka hilibka lo'da ee lo'da uu kordhay (Bishii Diiseembar 2016 - Diisambar 2015) 22% UAH iyo 10% Dollar.
Sababtoo ah la'aanta dhoofinta Ruushka, bixinta hilibka doofaarku aad ayay u sarreeyeen, marka qiimaha hoos ayuu u dhacay, inkastoo ay isku dayeen in ay soo saaraan qiimo korodhsiinta waqtiyada dalabka sare. Natiijadu waxay ahayd - kororka qiimaha doofaarka ee doofaarka ee sanadka (Bishii 12aad - Disember 2015) 6% oo keliya ee hryvnias iyo hoos u dhac 5% marka la eego dollar, halka qiimaha doofaarka ee suuqa adduunka oo ah sida FAO Index uu kordhay 18% sannadkii .
Hilibka digaaga ee suuqyada Yukreeniyaanka ah ayaa sidoo kale wakhti adag haystay, sicirka billaabay in uu la tartamo qiimaha doofaarka iyo kordhay sanadka (December 2016 - December 2015) oo keliya 7% hryvnias oo hoos u dhacay 4% marka la eego dollar. Tani waa inkastoo xaqiiqda ah in qiimaha adduunka ee digaag sida ku xusan index FAO uu kordhay 5%. Tani, si kastaba ha ahaatee, waxay soo saartay koror ballaadhan oo guulaystay oo dibedda ku dhoofisa, inkastoo xaqiiqda ah in iibka suuqyada gudaha ay hoos u dhaceen.